Izizathu zamanani entengo ehlukile
Ikhaya / Umhlahlandlela Wompompi / Izizathu zamanani entengo ehlukile
2020 / 07 / 29 UkwahlukanisaUmhlahlandlela Wompompi 5884
Izinto eziphambili zesikhiphi emakethe ziyinsimbi eyakhiwe ngensimbi, ipulasitiki, i-zinc alloy, i-alloy alloy ne-iron stainless. Insimbi yensimbi kulula ukugqwala, ipulasitiki kulula ukuguga, uzinzo lwe-zinc alloy lubi, kulula ukuqhuma, okuholela ekushodeni kwempilo yesevisi, ngakho-ke lezi zinto ezintathu azinconyelwe ukusebenzisa ipayipi. Bangaphezu kuka-90% abafohli abasezingeni eliphakeme ekhaya nakwamanye amazwe ngokuvamile bakhetha ukusebenzisa i-cast cast. I-Brass iyinto efaneleke kahle yesikhiphi, umphumela we-antibacterial ulungile, lapho i-H59 yethusi ifaneleka kakhulu, okuqukethwe okuholayo kubuye kuqeqeshelwe, okuqukethwe okuhola kwe-H62 akukhawuleki kangako ukugqwala; insimbi engenasici ingenziwa ngaphandle kokuhola, kepha ngenxa yobulukhuni benqubo, akukho nzuzo ye-antibacterial yethusi ayemukelekile. I-Valol spool. Isikhiphi sivulekile futhi sivulekile futhi sicisha futhi nsuku zonke.
I-valve spool inquma impilo yefenisi. Njengamanje, i-ceramic valve core iyona nto efanelekayo ukusetshenziswa kwekhaya, i-valve yokugcina ephezulu ye-lisucet ingeniswa kakhulu noma kungaphandle kwangaphandle i-ceramic valve core, ihlala isikhathi eside, kepha futhi kube izikhathi ezingama-500,000 lapho switch ingashayeki.
Ubuso obukhethwe ngogesi bompompi abanentengo ephezulu ngokuvamile buba nokuzwakala okufana nesibuko, futhi uma uyicindezela ngomunwe wakho, izimpawu zeminwe ziyonyamalala ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, ubuchwepheshe obuthuthukisiwe be-eco-friendly plating bungasusa ukungcoliswa kwesibili komkhiqizo futhi buqinisekise ubumsulwa bamanzi. Kwigumbi lokugezela eliningi, inqubo yokufaka i-plating ngokuyisisekelo ilingana nokufaka i-chrome plating.
Impilo yenkonzo yamapulethi asezingeni eliphakeme yiminyaka emi-5, ikhwalithi isemihle kakhulu, futhi yonke ihlangabezana nezidingo zamazinga okonga amanzi kazwelonke, umkhiqizo uqinile, ukonga amandla nokuvikelwa kwemvelo kuqokomisa ukubaluleka komkhiqizo. Amaloli ashibhile ngemuva kokuthengisa noma ngemuva kwengozi, impilo yenkonzo imfushane kakhulu, noma kusetshenziswe izinyanga ezimbili noma ezintathu kulimele, abathengi abanconyelwanga ukuthenga.
Isiqinisekiso sokuthengisa ngemuva.
Ukukhiqizwa okuhlelekile komkhiqizi, uhlelo oluphelele lukazwelonke lokuthengisa ngemuva kokuthengisa, noma ngabe kunengozi yomkhiqizo noma ukwehluleka, nganoma yisiphi isikhathi umenzi noma umhambisi ukuze axazulule isinqumo, onesibopho sokukhiqizwa kokumiswa okuphakeme komkhiqizo womkhiqizo, indawo yokugezela ephezulu kakhulu brand, ukhathazeke kakhulu ngokuthengiswa komkhiqizo ngamunye okhiqizwa idumela.
Edlule :: Ungayikhetha Kanjani Imikhiqizo Enempilo Nophephile Olandelayo: Sebenzisa Ukuqapha kwe-faucet
2020 / 11 / 18 847